Shiinaha HSL-YTJ2621 Automatic Glass Goynta Mashiinka Mashiinka & alaab-qeybiyeyaasha | Huashili
Fjajabinta Hawlaha caadiga ah Goynta software software 1.Professional goynta galaas xirfad leh iyo filaayo in functionettingting function: si weyn loo hagaajiyo heerka goynta galaaska iyo waxtarka wax soo saarka.
2. La jaan qaadi kara barnaamijka OPTIMA ee Talyaani ah iyo barnaamijka GUIYOU ee caadiga ah softiweerka G-ga: Xaqiiji guud ahaan faylasha qaababka kala duwan.
3.Fault ogaanshaha iyo function alaarmiga: Waxay si otomaatig ah u duubi kartaa xaaladda socda ee mashiinka ee habka wax soo saarka, alaarmiga cilad iyo dhibaatooyinka soo bandhigida.
Meelaynta laser Fiber
1. Raadinta tooska ah iyo meelaynta muraayadda: Cabbiraadda saxda ah ee booska dhabta ah iyo xagasha leexashada ee muraayada, iyadoo la ogaanayo toosinta tooska ah ee wadada goynta daabka, iyo hagaajinta waxtarka
2. Sawirka qaabdhismeedka caqliga leh: Baadhuhu wuxuu si xikmad leh u baari karaa walxaha qaabeysan wuxuuna si otomaatig ah u soo saari karaa sawirada si loo ogaado goynta dusha.
Hawlaha ikhtiyaariga ah Shaqada gacanta Telescopic Xaqiijinta sare ee saxda ah iyo wadista gawaarida ayaa la qaatay si loo beddelo asalka asalka ah ee asalka ah, mar kasta oo raritaanka la dhammeeyo dhaqdhaqaaqa gacanta telescopic, mashiinka uma baahna inuu dhaqaaqo.
Waxaa lagu xakamayn karaa kumbuyuutar si iskiis ah, iyo raritaanka otomaatiga ah iyo goynta tooska ah waa la dhammaystiri karaa iyada oo aan la helin faragelin gacan qabasho ah, taas oo si weyn u hagaajinaysa waxtarka;
Hoos udhaca tirada socodka awgeed, duugista farsamada si aad ah ayaa loo dhimay oo nolosha iyo xasiloonida mashiinka ayaa la hagaajiyay.
Calaamaynta otomaatiga ah Beddel calaamadeynta gacanta. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, daabacaddu waxay daabacdaa sumado duuba macluumaadka muraayadda.
Calaamadda waxaa lagu dabaqayaa dusha muraayadda u dhiganta iyada oo lagu calaamadeynayo dhululubada.
(Waxaan kula talinaynaa macaamiisha inay qaabeeyaan shaqada calaamadeynta)
Shaqada jabinta muraayadda Ku rakib usha ejector dusha sare ee goynta.
Dhululubadu waxay riixaysaa usha ejector-ka si ay uga jarto muraayadda.
GaadiidkaAstaamaha Saqafka goynta waxaa lagu qalabeeyaa nuugista wax xambaara. Looma baahna in gacanta lagu dhaqaajiyo muraayadda.
Muraayadda la jarjaray waxaa loo wareejin karaa miiska jebinta galaaska miiska iyada oo loo sii marinayo nuugaha wax lagu xambaaro, qalliinka jebinta waxaa lagu sameeyaa miiska jabinta dhalada.
Qeybta Mashruuc Tilmaamaha Mashruuca Fiiro gaar ah
Qaabeynta sheyga Qaybta farsamada Mashiinjir Daaweynta gabowga ka dib markii alxanka qaybaha adag. Saxanka hagaajinta dhinaca alwaaxa waxaa lagu farsameeyaa birta si loo hubiyo saxsanaanta iyo xasilloonida.
Dogob fidsan X-dhidibka iyo Y-dhidibka socodka alwaaxa fidsan waxay qaataan astaamo gaar ah oo loo yaqaan 'aluminium aluminium', kuwaas oo leh awood sare iyo saxnaan sare, waana kuwo waara oo xasilloon.
Rakib Qaadashada sagxad jireed iyo qaabdhismeed jilicsan si loo hagaajiyo xoogga dusha ilkaha oo si wax ku ool ah loo yareeyo buuqa
Soosaarka saliida Shidaalka saliida daabku wuxuu qaataa habka buuxinta saliida si otomaatigga ah, iyada oo aan faragalin lagu sameynin.
Fan Kartoo taageere-awood sare leh, cadaadis dabayl sare iyo qulqulka weyn, hubi sabeynta muraayad siman.
Goynta matoorka wadista 2 deji waxqabadka sare ee xakamaynta warshadaha mashiinka adeegga ee xakamaynta saxda ah iyo hawlgalka fudud.
Mesa Guddiga cufnaanta badan ee biyuhu waa substrate, dusha sarena waxaa lagu daboolay wax-soo-saarka warshadaha lidka ku ah. Hubso in adeegsiga xasilloonida ee jawiga qoyan.
Qaybaha korantada Kombiyuutarka martida loo yahay Hawl-wadeen kombiyuutar karti-sare leh oo loogu talagalay xakamaynta warshadaha; sumadda muujinta qaraarka sare.
Maamulaha Kaararka guddiga xakamaynta khaaska ah ee Huashil, nidaamka xakamaynta Toshiba PLC.
Fibreerka indhaha Wuxuu adeegsadaa qalabka wax lagu baaro ee Panasonic laser ka laga keeno Japan.
Cunsurka Laga soo dhoofiyay qaybaha maareynta summada koowaad ee caalamiga ah sida OMRON, Panasonic.
Halbeegyada Farsamada Qalabka mashiinka Cabirka Length * width * height ： 3000mm * 4700mm * 1420mm
Dhererka miiska 880 ± 30mm (Cagaha hagaajin kara）
Shuruudaha awooda 3P ， 380V ， 50Hz
Awood rakibay 13kW （Isticmaal awood3KW）
Hawo cufan 0.6Mpa
Halbeegyada waxqabadka Iska yaree cabbirka muraayadda MAX.2440 * 2000mm
Iska yaree dhumucda muraayadda 2 ~ 19mm
Xawaaraha madaxa X dhidibka 0 ～ 200m / min (waa la dejin karaa)
Xawaaraha madaxa Y dhidibka 0 ～ 200m / min (waa la dejin karaa)
Dardargelinta goynta ≥6m / s²
Goynta kursiga mindi Madaxa goynta wuxuu u rogi karaa 360 digrii (goynta saxda ah ee xariiqyada toosan iyo qaababka gaarka ah)
Saxnaanta goynta ± 0.2mm / m （Iyada oo ku saleysan cabbirka xariiqa goynta ka hor inta uusan muraayadda jabin）
Name Summad Qaran Muuqaalka Fiiro gaar ah
Soo-saarista barnaamijka Guiyou Shiinaha
Goynta software Weihong Shiinaha Xaqiijin la hubo
Xadiidka tareenka toosan T-guul Taiwan
Qaybaha korantada AirTAC Taiwan
Waalka Solenoid AirTAC Taiwan
Bedelaha sawir qaadaha Cimroon Jabbaan
Encoder Cimroon Jabbaan
Mindida goynta Bohle Jarmalka
Khad jilicsan oo sarreeya Kangerde Shiinaha
Dabayl dabaysha Sun Rise Taiwan
Qalabka gawaarida gawaarida xaddiga XX DEAOUR Shiinaha 1.8KW * 2 Chips Intel
Y gawaarida adeegga DEAOUR Shiinaha 2.2KW
Mootada talaabada EKP Shiinaha 1kw
Nidaamka Xakamaynta Toshiba Jabbaan
Xiriir Schneider Faransiiska
Inverter JRACDRIVE Shiinaha
Jabiyaha AirTAC Taiwan
Qaadista ugu weyn NSK Jabbaan
Relay dhexdhexaad ah AirTAC Taiwan
Qalabka sabeynta hawada Habayn Shiinaha Habayn 3KW
U dhawaanshaha biiro Cimroon Jabbaan
Scanner Panasonic Jabbaan
Nidaamka ogaanshaha cilladda HUASHIL Shiinaha
Qalabka Gear T-guul Taiwan
Fiiro gaar ah：Maaddaama qalabka si joogto ah loo hagaajinayo, faahfaahinta qaar waa la beddeli doonaa, shaqaalaha la-tashiga ahna waa inay ku guuleystaan ​​qaabka ugu dambeeyay.
Hore: HSL-CNC3826 Mashiinka Mashiinka Dhalada ah
Xiga: HSL-YTJ3826 Mashiinka Mashiinka Goynta Tooska ah + HSL-BPT3826 Shaashadda Jabinta Koobka
Automatic Flat Glass Goynta Mashiinka Mashiinka
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dareemay
Mashiinka Mashiinka Goynta Gawaarida Gawaarida Gawaarida oo Buuxa
Mashiinka Mashiinka Goynta Tooska ah
Glass Automatic Loading Oo Machine Jarida